အင်တာနက်ပေါ်မှာ အထပ်စာလုံး (ပါဠိ) ရေ့းနည်း(လွယ်လွယ်လေး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အင်တာနက်ပေါ်မှာ အထပ်စာလုံး (ပါဠိ) ရေ့းနည်း(လွယ်လွယ်လေး)
အင်တာနက်ပေါ်မှာ အထပ်စာလုံး (ပါဠိ) ရေ့းနည်း(လွယ်လွယ်လေး)
Posted by မှော်ဆရာ on Oct 25, 2010 in News | 15 comments
ဆရာလုပ်တယ်လဲ မပြောပါနဲ့၊ သိပြီးသားဆိုရင်လဲ အပြစ်မတင်ပါနဲ့ ။ အထပ်စာလုံးတွေ အင်တာနက်ပေါ်မှာ မရေးတတ်ကြတာ တွေ့နေရတော့ သိတာလေး ပြန်ဝေမျှတယ်ပဲ သဘောထားပါ။
ဥပမာ ကမ္ဘာကို ကဘာ လို့ ရေးနေရတာ ဗုဒ္ဓ ကို ဗုတ်ဒ လိုရေးနေရတာတွေလေ၊
ပထမဆုံးသိရမှာ တော့ ခလုပ်တစ်ခုစီ ပေါ်မှာရှိတဲ့ မြန်မာ စာလုံးနှစ်လုံးကိုပါ။ မြန်မာစာရိုက်တတ်သူတွေသိပါတယ်။ A ခလုပ်ပေါ်မှာ သဝေထိုးနဲ့ ဗထက်ချိုင့် ရှိပါတယ်။ သဝေထိုးက ရိုးရိုးရိုက်ရင်ပေါ်ပါတယ်၊ ဗထက်ချိုင့် ပေါ်စေချင်ရင် shift နဲ့ တွဲနှိပ်ရပါတယ်။ ရိုးရိုးရိုက်ရင်ပေါ်တဲ့စာလုံးကို အောက်စာလုံး ၊shift နဲ့ တွဲနှိပ်ရတဲ့စာလုံးဆိုရင် အပေါ်စာလုံးလို့မှတ်ပေးပါ။ Z မှာဆိုရင်- ဖ – က အောက်စာလုံးပါ။ -ဇ- က အပေါ်စာလုံးပါ။
နောက်တစ်ခု Tide Key ဆိုတဲ့ ခလုပ်ကို မှတ်ပေးပါ။ tab အပေါ်မှာရှိပါတယ်။ (1)ခလုပ်ရဲ့ ညာဘက်ဘေးကပါ။ ပုံမှာလဲ ပါပါတယ်။ အဲဒါ အထပ်စာလုံး ရိုက်ဖို့ အဓိကလိုတဲ့ ခလုပ်ပါ။
ကမ္ဘာ ဆိုတဲ့ စာလုံး ရိုက်မယ် ဆိုရင် – က -နဲ့ – မ – ကို အရင်ရိုက်လိုက်ပါဦး။ အထပ်စာလုံးက – ဘ – ပါ။ဒါကြောင့် Tide Key ကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ ဖိမထားပါနဲ့ ။ တစ်ချက်ပဲ။ ပြီးရင် – ဘ – ရှိတဲ့ နေရာ B ခလုပ်ကို ဒီတိုင်း တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို ဘကုန်းက အထပ်စာလုံးအနေနဲ့ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။လွယ်ပါတယ်။ဘာမှမှတ်စရာမလိုဘူး။
အပေါ်စာလုံးဆိုရင်တော့ shift နဲ့ Tide Key ကိုတွဲနှိပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ ၀ိဇ္ဇာ …
– ဇ – ဆိုတာ အပေါ်စာလုံးပါ။ shift နဲ့တွဲနှိပ်မှ ပေါ်တာပါ။အဲဒါကို အထပ်စာလုံးလုပ်မယ်ဆို shift နဲ့ Tide key ကို တွဲနှိပ်ပါ။ တချက်ပါပဲ။ ဖိမထားပါနဲ့။ပြီးရင် – ဇ – ရှိတဲ့နေရာ z ကို ဒီတိုင်းနှိပ်ပါ။ shift နှိပ်စရာ မလိုတော့ပါ။ ကျန်တာတွေလဲ ဒီအတိုင်းပါ။
အတိုချုပ်က ရိုးရိုးစာလုံးကို အထပ်လုပ်ချင်ရင် Tide Key ကို တစ်ချက်နှိပ်။ပြီးရင် အထပ်လုပ်ချင်တဲ့ စာလုံးကို နှိပ်
အပေါ်စာလုံးတွေ(shift နဲ့တွဲနှိပ်မှ ပေါ်မယ့်စာလုံးတွေ)ကို အထပ်လုပ်ချင်ရင်တော့ shift နဲ့ Tide Key ကိုတွဲနှိပ်။ ပြီးရင် စာလုံးရှိရာခလုပ်ကို ဒီတိုင်းနှိပ် (shift နဲ့ တွဲနှိပ်ရန် မလိုတော့ပါခင်ဗျာ။ )
တချို့စာလုံးတွေတော့ ဒီတိုင်းပေးထားပါတယ်။ ဤ ဆိုရင် T မှာ၊ ၌ ဆိုရင် Y မှာ ၊ ၍ ဆိုရင် I မှာပါ။ Tide Key ကိုတော့ တစ်ချက်အရင် နှိပ်ပေးပါ။
အသေးစိတ်ကြည့်ချင်ရင် လက်ကွက်ပုံစံ ခင်ဗျားအခုကိုင်နေတဲ့ စက်ထဲမှာရှိပါတယ်။ start >All Program>Alpha ZawGyi Unicode System>Alpha ZawGyi Unicode System ကိုနှိပ်ပြီး ကြည့်နှိုင်ပါတယ်။
မရှင်းရင် ကွန်မန့် တင်ခဲ့ပါနော် ။ ပြန်ရှင်းပေးပါ့မယ်။ သိသွားရင်လဲ အမှတ်တရလေး ချန်ခဲ့ပါ။
Tilde Key ကိုရိုက်ရင် ] ချည်းထွက်လာတယ်..။ကမ္ဘာဆိုရင်..ကမ]ဘ ဖြစ်နေတယ်..
ကမ္ဘာ၊ ဝိဇ္ဇာ၊အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒ န္တ ဆရာတော် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု၊
သင့်တော်ရာ စာလုံးလက်ကွက်လေးတွေ စုထားတာကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ microsoft word ဖိုင်ပေါ်မှာ သုံးကော်လံခွဲ
သိမ်းထားတာ ဒီကွန်းမန့်နေရာမှာကျတော့ တလုံးချင်း ဒေါင်လိုက်ပေါ်နေလို့ မလိုအပ်ဘဲ နေရာမပြုန်းတီးရအောင် အလျားလိုက် နေရာပြန်ချလိုက်ပါတယ်။ သုံးလိုသူများ microsoft word ပေါ်မှာ ပြန်သိမ်းလိုက်ရင် အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ မြန်မာစာလုံး ရိုက်ကာစမှာ အဲဒီဖိုင်လေးကို ဖွင့်ထားပြီး မသိတဲ့စာလုံးတွေကို ရှာရိုက်ပါတယ်။ တပတ်လောက်ကြာရင် သိပ်အခက်အခဲမရှိတော့ပါ။ အကုန်လုံးကို မဖော်ပြထားပေမဲ့ ဒီစာလုံးတွေကို သိနေရင် တော်ရုံတန်ရုံစာကို အလွတ်ရိုက်လို့ ရနေပါပြီ။
ကမ္ဘာ၊ ဝိဇ္ဇာ၊အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒ န္တ ဆရာတော် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ဘုရား
တပည့်တော်ရဲ့ စာလုံးလက်ကွက် အလှူအတွက် ရေစက်ချ တရားလေး တပုဒ်လောက် သနားတော်မူပါ။
က – U္က- ~+U ခ -C္ခ-~+C ဂ -shift+8္ဂ-~/shift+8 ဃ -shift+C္ဃ-~/shift+C င -I
စ -P္စ-~+P ဆ -Q္ဆ -~+Q ဇ -shift+Z္ဇ-~/shift+Z ဈ -shift+> ည -N ဉ -~+N
တ -W္တ-~+W္တွ -~+shift+E ထ -X္ထ-~+X ဒ -‘္ဒ-~+’ ဓ -shift+’္ဓ-~/shift+’ န -E
္န-~+E န-shift+E ပ -Y္ပ-~+Y ဖ -ဇ္ဖ- ~+Z ဘ -B္ဘ-~+B ဗ -shift+A္ဗ-~/shift+A
မ -R္မ-~+R ဏ -shift+P္ဏ-~/shift+P ဏ္ဍ-shift+2 ဌ -shift+X ဠ -shift+V ဋ္ဌ -shift+\_
ဎ -~+< ဋ -shift+3္ဋ-~/shift+3 ဍ -shift+1 ဍ္ဍ- ~+1 ၌-shift+4 ၎င်း-~+4 ရ -shift+7
ရ -~/shift+7 ၍ -~+I ယ -< လ -V္လ-~+V ဝ – shiftဲ-shift+J့-Hံ- shift+H `ံ-~+shift+H
`့-~+Hု-Kှူ– ~+Kှု-shift+Iူ-~+Lူ-shift+Lု-shift+K ၊ -shift+? ။ -?ှ-Shift+S
ှ-~/shift+Sျှ -shift+Qျွှ -shift+Wျွ -shift+R္ဈ- ~/shift+>ွှ-shift+Tွ-shift+Gိ-Dိံ-~+D
ျ -Sျ -~+Sါ် – shfit+; င်္ -shift+Fြ – shift+Bြ – shift+Nြ – ~+shift+Nြ -shift+M
ြ – ~/shift+Mြ– ~+Jြ – Jြ-~/shift+J ဩ -~+5 ဪ -~/shift+5 ၌ -shift+4
ဏ္ဍ -shift+2 ဍ -shift+1 ဦ -~/shift+0 ၏ -\_ ၎င်း-~+4 ။ -? ၊ -shift+?
ရိုက်တုန်းကတော့ အကောင်းပဲ၊ ကွန်းမန့်လဲတင်လိုက်ရော စာလုံးတွေ ရောကုန်တယ်။ လုကံဝကံပါပဲ။
အဲ့ဒါ ဆရာတော်ကို ပြောင်စပ်စပ်လာလုပ်လို့နောက်နောင် ဒီ့ ထက်နာမယ်မှတ်
ဆွမ်းဘုံးပြီးလို့ မြို့ ကို ပျံတော်မူလာတဲ့အခါ မှ ရေဆက်ချပေးမယ်။
မိသားစုက ဥဥရေ ကျေးဇူးပါ
အဂ္ဂမဟာ သီရိ သုဓမ္မ သိဂီ င်္မဏိ ဇောတ ဓရ ဆူး..
ကမ္ဘာပတ်၍ ၀ိဇ္ဇာ သိပ္ပံ ပါဠိ ပိဋကတ်တော်များကို လှည့်လည် ဆည်းပူး အထူး အာရုံစိုက်၍ မန္တလေး ဂေဇတ် အားဖတ်ရှူ မုဒိတာ ပွားနေကြောင်း။
ရွာဦးက ကပ္ပိယ ထော်လာဂျီအောင်ပု ဆရာတော် ကြောင်ကြီး ဆွမ်း ဘုန်းပေးအပြီးပျံလွန်တော်မူကြောင်း ရွာထဲမှာ လျောက်ပြောနေကြောင်း။
ရွာဦးက ကပ္ပိယ ထော်လာဂျီအောင်ပု သည် ဆရာတော် ဘုရား ကြောင်ကြီး အိမ်မှ ဆွမ်း ကို ဘုန်းပေးအပြီး ပျံလွန်တော်မူကြောင်း ရွာထဲမှာ လျောက်ပြောနေကြောင်း။
္ဘဘုန်းဘုန်းပုရေ ဆွမ်ဘုန်းပေးပြီး ပျံတော်မူပြီ ဆိုတော့
အန်ကယ်ကြီးရေ – အမျှက ၂ခါပဲပေးရသေးတယ်ဗျို့
အမျှ ၂ခါဘဲ ရလို့ လိုရာ ခရီး မသွားနိုင်သေးဘူးနဲ့ တူတယ်.. ကဲကဲ.. ဆူး ကလည်း လိုတဲ့ အမျှ တခါ ပေးလိုက်တယ်.. မီးလေး ရေ…
ကလေးတွေ အတွက်ရေးပါတယ်ဆို ၊ဆရာတော်တို့….ကပ္ပိယတို့ ….အက်ဒမင်ကြီးတို့ ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင် မန်းဘာတို့လာတော့ ကြောက်တာပေါ့။
kai ခင်ဗျား ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ အသုံးများတဲ့ ဇော်ဂျီယူနီကုတ်ဖောင့်အတွက် ရေးပေးထားတာပါ။ အကိုသုံးတာ win kalaw ဖောင့်ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို လိုချင်ရင် http://www.alpha.com.mm , http://www.alphamandalay.com တို့မှာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလို့ရပါတယ်။ ဆော့ဝဲသေးသေးလေးပါ။ run လိုက်ရင် ဇော်ဂျီ ယူနီကုတ်ဖောင့်ကို သွင်းပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ အခု kai သုံးနေတဲ့ kalaw ဖောင့်ကိုလဲ ထိခိုက်မှုမရှိပါဘူး ။ kalaw နဲ့ရေးထားတာတွေကိုလဲ ဖတ်လို့ရပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ။။။။